Vondrom-bavaka - Fihirana Katolika Malagasy
Fitohizan'ny hafatra : Vondrom-bavaka
Mitiasoa - 09/04/2012 14:36
izaho dia mpitarika ao amin'ny faritra misy ahy. Amintsika katolika moa dia misy ny hoe Ankohonam-Piangonana Velona (APV). Isaky ny APV dia misy ny filoha mpitarika. Anisan'ny zavatra hatao any anatin'ny APV ny vondrom-bavaka. Te hampianatra ireo lehiben'ny APV ny mahakasika izay vondrom-bavaka izay aho (Ny tokony hatao...), ary indrindra ny mba hanintomana ireo kristianina ao anatin'ny APV mba ho liana sy ho tamana hamonjy ny vondrom-bavaka hatao io. Izay no mba hangatahiko hevitra eto, inona no tsara hampitaiko amin'ireo lehiben'ny APV ireo, inona avy no tokony hampianariko azy? Misaotra mialoha
barli - 01/08/2012 09:50
Miarahaba anao amin'ny anaran'ny Tompo,
Raha ny eritreritro dia tsara raha ampianarina (miezaka raha ny marina kokoa) manao vavaka tora-po tsy ny mpitarika ihany fa na ireo taritina aza, ezahana ny tsy manao ireo fomba efa mahazatra mba hialana amin'ilay hoe pli vava, ary tsy adino velively ny mamaky tenin'ny Soratra Masina, manao fampianarana ny momba izany satria izany no tena banga ao.
Izay no soso-kevitro ary mino aho fa hahita fahasoavana bebe kokoa ireo ao amin'ny fikambanana mba ho tena APV tokoa ary hahatsapa fa ao amin'ny tenin'ny Soratra Masina no tena hanovozana hery sy finoana.
speedynix - 29/01/2015 14:59
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'Izy Tompo,
misy fanotaniana kely mba tiko ho valiana raha azo atao. Nanatrika fitaom-pivavahana tao amin'ny vondrom-bavaka katolika karismatika ny tenako. Vao voalohany izy io dia gaga ny tenako fa ohatra ireny fomba fanaon'ny sekta irony no zavatra hitako tao ka dia natahotra ny tenako hoe inona marina izy ity fa tena hitako tao hatramin'ny misy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ny fahazoako ny fivavahantsika katolika mantsy dia ao anaty filaminana sy fahanginana no ahitana ny fanahy masina nefa ity hitako ity dia tena nahagaga ahy mihintsy ka saika haka fanazavana kely izaho raha afaka misy mamaly.
Misaotra indrindra tompoko amin'ny fanapiana.
hery - 02/02/2015 09:28
Angamba tsy marina kosa ilay hoe ao anaty filaminana sy fahanginana no ahitana ny Fanahy Masina ka. Ny Fanahy Masina dia mety ho hita na aiza na aiza... na eny an-tsena aza. Samy manana ny anentanan'ny Fanahy azy mantsy ny tsirairay.
Ny fanaingam-panahy karismatika dia mbola vaovao ho an'ny maro, ary mila mitandrina satria misy amin'izy ireny tsy Katolika na dia misora-tena ho katolika aza. Izany hoe tsy eken'ny Eveka eo amin'ny diosezy. Fa raha eken'ny Eveka dia tena Katolika izany.
Izy ireny dia ireo Katolika izay manana fientanana manokana ka nangataka ny hanana fankalazàna ny litorjia mihetsika kokoa. Tsy misy maharatsy izany rehefa tsy mitondra fanafintohinana ho an'ny hafa.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0821 s.] - Hanohana anay